घरमै आइसोलेसन बस्दा के गर्ने, के खाने? (भिडिओ) :: डा. निमेश पौडेल :: Setopati
‘तेस्रो लहरमा संक्रमण दर धेरै तर कम खतरनाक’
डा. निमेश पौडेल
अहिले कोभिड-१९ (ओमिक्रोन) को तेस्रो लहर फैलिरहेको छ। ओमिक्रोन भएमा नअत्तालिनुहोला। यसको लक्षण अरूको भन्दा हल्का छ। तर दीर्घकालीन रोगका बिरामी छन् भने अलि सचेत हुनुपर्छ।
सुरूमा ज्वरो अधिकतम आउनसक्छ। सुरूको दिनमा १०३ डिग्रीसम्म ज्वरो आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा समेत नआत्तिनुहोला।
धेरै गाह्रो भएको छ भने अस्पतालमा गएर चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। ज्वरो आउँदा सिटामोल खान सकिन्छ। त्यसलाई दिनको तीन पटकदेखि चार पटकसम्म खान सकिन्छ। दिनमा २ देखि ३,४ लिटर पानी पिउनुपर्छ।
पौष्टिक खाना धेरै खानुपर्छ। ज्वरो छैन भने मासु समेत मजाले खान मिल्छ।
ओमिक्रोन भएको बेलामा सम्भव भएमा अलग्गै कोठामा सुत्ने र शौचालय अलग्गै प्रयोग गर्नुपर्छ। खाने ठाउँ अलग्गै गरेको राम्रो हो। आफूले सकेमा शौचालय आफैंले सफा गर्नुपर्छ।
ज्वरो तीन दिनभन्दा बढी आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने अस्पताल जानुपर्छ। सम्भव भएसम्म घरमा अक्सिमिटर राख्नुपर्छ र बिहान, बेलुका नाप्नुपर्छ। सास फेर्न गाह्रो भएमा अरू बेलामा समेत नाप्नुपर्छ।
रिंगटा लाग्यो, माथि हेर्दा गाह्रो भयो भने अक्सिजन नाप्नुपर्छ। अक्सिजनको मात्रा ९० भन्दा तल जान थाल्यो भने तुरून्तै अस्पताल जानुपर्छ। धेरै गाह्रो भयो भने चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ। अहिलेको ओमिक्रोनले साह्रै धेरै गाह्रो पारेको छैन। तर पनि बिरामी अस्पताल भर्ना पनि भएका छन्। दीर्घ रोग भएका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना हुनु परेको छ।
यसले एकैपटक धेरै जनालाई सार्न सक्ने भएकोले होसियारी अपनाउनुपर्छ। ओमिक्रोनले पहिलाको भन्दा १० गुणा धेरै सार्छ।त्यसैले हामी सचेत हुनुपर्छ। हामी सचेत भयौं भने अस्पतालका बेडहरू भरिँदैनन्।
विशेषगरी सास फेर्न गाह्रो भएमा र ज्वरो नरोकिएमा भने अस्पताल जानैपर्छ।
कतिपय परिवारले एउटै मात्र कोठा लिएका हुन्छन्। धेरै व्यक्ति एउटै कोठामा बसेको बेलामा आइसोलेसन झनै कठिन कुरा हो।अहिलेको भाइरसको चरित्र अनुसार एउटालाई लागेपछि अर्कोलाई सरिहाल्छ। त्यसैले सचेतता अपनाउनुपर्छ।
त्यस्तो अवस्थामा मास्क लगाउने सकेसम्म अलग्गै खाने र शौचालय गएपिच्छे सफा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
अरू बेलाभन्दा पौष्टिक खाना खानुपर्छ। हरियो तरकारी, फलफूल र झोलिलो खाना खानुपर्छ।
कोभिड लागेको बिरामीलाई १ हप्तादेखि १० दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। ७ दिनसम्म अर्कोलाई सार्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। ओमिक्रोन हुँदा धेरै सिंगान बग्ने भएकोले चाँडै सर्ने हो। सँगै धेरै बिरामीलाई लक्षण समेत देखिँदैन।
अहिले देखिएकोभन्दा अझै धेरै ओमिक्रोनका बिरामी छन्। तर अहिले परीक्षण थोरै छ। सबैलाई परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन।धेरै खतरामा रहेका र लक्षण देखिएकाले मात्रै परीक्षण गर्ने हो।
तेस्रो लहरमा खतरा कम देखिएको छ। तर संक्रमणको दर धेरै उच्च छ।
अब यसपछि आउनसक्ने भाइरसको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्छ।
ओमिक्रोनको संक्रमणबाट घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरूले कस्तो दैनिकी अपनाउने, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने लगायतका विषयमा अल्का अस्पताल जावलाखेल र एभरेष्ट अस्पताल बानेश्वरमा कार्यररत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. निमेश पौडेलसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले भिडिओ कुराकानी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८, ०६:५०:००